Global Voices teny Malagasy » Tailandy: Fampielezan-kevitra amin’ny ‘Fidio ny Tsia’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2011 7:11 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fanoherana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Politika
Hilahatra any amin'ny biraom-pifidianana ireo Tailande amin'ny herinandro ambony  ary na dia mitarika aza ny mpanohitra amin'ny toerana sasany, mbola tsy azo antoka tanteraka aloha hoe iza amin'ireo vondrona no hahazo ny fandresena. Niavaka tamin'ny fomba fanao hatramin'izay, fa nahitana fahafahana misafidy ny tsia ny vato  ho an'ny mpifidy.
Hetsika amina fampielezan-kevitra no nokarakaraina handrisihana ny mponina mba hifidy amin'ny andron'ny fifidianana, fa ‘Fidio ny Tsia’. Ny Vahoaka Miray hina ho amin'ny Demokrasia (People’s Alliance for Democracy – PAD) na ny Miakanjo Mavo (Yellow Shirts)  izay nikarakara ny fihaonana maro nanohitra ny governemantan'i Thaksin Shinawatra an-taonany vitsy lasa izay no tena vondrona manohana ny ‘Fidio ny Tsia’. Mpiara-dia taloha tamin'ny Praiminisitra amin'izao fotoana i Abhisit Vejjajiva izy ireo, ary tena manohitra mafy an'i Yingluck  Shinawatra, zandry vavy indrindra an'i Thaksin.
Mihevitra ny PAD fa tokony hitsipaka ny rafi-pifidianana feno kolikoly ny vahoaka izay heverin'izy ireo fa ibahanan'ny mpanao politika tenda-kanina amin'ny fahefana. Etsy andanin'izany, tiana izy ireo hapetraka voalohany aloha ny fanovana ara-politika sy ara-pifidianana.
Manazava ny anto-pisian'ny  PAD i Bangkok Pundit :
Isan'ny fomba fijerin'ny People’s Alliance for Democracy ny safidy hoe ‘Fidio ny tsia’ satria ao anaty kolikoly ny rafitra ara-politika amin'izao fotoana any Tailandy aru mila diovina amin'ny zavatra maloto rehetra, anisan'izany ny nihatahan'i Tailandy nandritra ny 3-5 taona(raha azo izany dia hoe fotoan'ny governemanta nasionaly nandritra ny 3-5 taona).
Maneho biby miakanjo sahala amin'ny mpanao politika ny sary peta-drindrin'ny ‘Fidio ny Tsia’ handresena lahatra ny mpifidy fa tsy ilaina ny mifidy satria ‘bibidia’ avokoa ireo isafidianana. Milaza  ny dikan'ny sary peta-drindrin'ny fifidianana i Catherine:
Manao akanjona lehilahy mpandraharaha ny biby ao amin'ny fampielezan-kevitra ara-politikan'ny Fidio ny Tsia. Mainty ny akanjo sasany fa ny hafa kosa miloko soratra manga kely sy mena. Toa hita soritra hoe misolo tena ny Antoko Demokraty ny tigra, ny tanala, ary ny voay (amin'ny manga kely) (พรรคประชาธิปัตย์, Phak Prachathipat). Maneho ny Miakanjo Mena (Red Shirts -พรรคเพื่อไทย, Antoko Pheu Thai) ny voay (miloko mena) .
Manana ny anjara toerany avy ny biby tsirairay ampiasaina eo amin'ny fisainana Tailande .
Buffalo: Miadana no dondrona.
Tigra: Kamo, mahazo tsy nisasatra.
Alika: mitabataba sy miady.
Tanala mitarika: olona tena ratsy.
Gidro: mandainga sy mangalatra.
Nolazain'ny manam-pahefa eo amin'ny fifidianana fa ara-dalàna  ny sary peta-drindrina. Manoratra i I-nomad:
Samy manohitra ny politikan'ny praiminisitra amin'izao fotoana i Abhisit sy ny taloha i Thaksin ireo antoko. Nolazaina fa tsy ara-dalàna ihany koa ny fampielezan-kevitra taloha tamin'ny fanombohan'ny volana Jona, izay biby ihany koa no natao tao. Ny antony ofisialy dia satria ngeza loatra ny solaitra misy azy ary naparitaka tamin'ny olona maro loatra.
Mahita ‘Fidio ny Tsia ‘ miangona any avaratr'i Tailandy  ny mpirakitr'isa Isaan :
“Mifidy ny tsia aho satria te hanambola sy fahefana fotsiny [ny kandida amin'izao fotoana],” hoy i Jakhawan Agachat, 51, raha toa izy mitazona taratasy kely mirakitra fanazavana .
I Brathuan Broongkamma, kosa etsy ankilany, dia maneho ny fitsipahany ny toetran'ireo mpanao politika. “Hitantsika fa manao fihetsika sahala amin'ny biby ireo mpanao politika ao amin'ny parlemanta. Tsy mahalala fomba izy ireo, sahala amin'ny biby,”
Manoratra i Tony Hedges fa fandaniam-potoana  ny mifidy ny ‘tsia’ :
Aza mba azon'ny fakam-panahy hifidy ny “tsia”. Mino aho fa eo ny safidy dia eo amin'ny fanantenana fa tsy misy fiantraikany amin'ny Mena akanjo ny fidio ny tsia, na izany aza mikitikitika ny governemanta. Fandaniam-potoana ny misafidy ny tsia. Tsy maninona izany. Rehefa miezaka ianao ny hifidy, dia fidio ny antoko ara-politika.
Mahita i FACT – Freedom Against Censorship Thailand fa karazana endrika fanoherana ankolaka  ny mifidy ny ‘tsia':
Tsy maintsy atao ny mifidy any Tailandy, lohahevitra hiharan'ny sazy henjana ny tsy mifidy. Mamporisika ny vahoaka tsy hifidy ny Miakanjo mavo (Yellowshirt ) PAD. Na izany aza, hitako ihany ho toy ny ‘fanoherana ankolaka’ kokoa izany noho ny hoe fandavam-bahoaka sivily. Amin'ity tetik'ady ity, mino kokoa isika fa antoko hafa, izay tendan-kanina nefa vendrana, izy ireo ihany no hifidy ny tenany.
Raha amin'ny teny fohy, tsy antenaiko hisy ny rariny na hety ny fifidianana amin'ny volana Jolay. Toy ny tany Etazonia, sy Zimbabwe, dia tsy hisy fiovana izany hoe mbola tsy hisy koa ny fanantenana. Raha mifidy isika, dia handresy ny tendan-kanina nefa vendrana, fa dia handresy koa izy ireo na tsy mifidy koa aza isika.
Raha mifidy isika, dia manorata amin'ny fanoherana ny fifidianana, fidio ny tenanao na ny omby tianao, na ny gidro tianao, simbao ny vato. Raha tena manana fahasahiana tokoa ny mpifidy hanohitra ny fifidianana, mety ho tonga saina ihany ny governemanta. Fa izany no vitan'ny tsy fanekem-bahoaka tsy manao herisetra, hamerina ny fahefana eny an-tanan'ny vahoaka.
Fihetse-po Twitter vitsivitsy avy any Bangkok:
@itteong:  RT @smithsensei: Zavatra tsara tokony hatao ny mifidy ny tsia? Mety hahalany ny kandida tsy tianao indrindra ny mifidy ny tsia.Aleo aza mifidy ny FARAN'IZAY RATSY INDRINDRA.
@bkkbrain:  @_Willowtree_ actually, raha fireneko io, dia toy izany ihany koa no nataoko… tena manaratsy tanteraka amin'ny vahoaka ny fampielezan-kevitra rehetra amin'ny “fifidianana ny tsia”
Mampitandrina ny lehiben'ny fiadidiam-paritra sasany fa mety hisy fiantraikany amin'ny filaminan’  i Tailandy ara-politika ny 20 isan-jaton'ny ‘tsia’ satria mety hihevitra ny fahaverezan'ny fahatokisan'ny olona azy amin'ny maha-rafi-piadidian'ny firenena ny hery sasany.
Mba hanakatonana ny fampielezan-kevitra amin'ny ‘Fidio ny tsia’ , dia misy ihany koa ny ezaka tena natao avy amin'ny antoko sasany mampatsiahy ny vahoaka ny hifidy ny ‘eny.’ 
‘sary apetaka'fidio ny eny' avy amin'ny pejy Twitpic-n'i @sweatyinbkk
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/30/18908/
 herinandro ambony: http://www2.ect.go.th/home.php?Province=election
 ny vato: http://asiancorrespondent.com/57961/what-is-happening-with-the/
 Miakanjo Mavo (Yellow Shirts) : https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2008-special-coverage/thailand-protests-2008/
 avaratr'i Tailandy: http://isaanrecord.com/2011/06/13/vote-no-on-the-march-in-khon-kaen/
 fandaniam-potoana : http://tonyhedges.wordpress.com/2011/06/05/the-stage-is-set/
 fanoherana ankolaka: http://facthai.wordpress.com/2011/06/21/factorial-if-voting-could-change-anything-it-would-be-illegal-no-choice-in-thailand/